Xisbiga Waddani oo hakiyey dibad-baxyadii iyo waan-waan ka bilaabatay Hargeysa – Hornafrik Media Network
Xisbiga mucaaridka ah ee Waddani ayaa maanta hakiyey isu soo baxii ay shalay ugu baaqeen taageerayashooda ka dib markii ay xalay xubno ergo ah oo iskood isu xilqaamay u kala dabqaadaan Xisbiga iyo Xukuumadda uu hoggaamiyo Muuse Biixi.
Xubnahan ayaa isku dayaya in xal laga gaaro xiisaddii maalmahan ka taagneyd Somaliland ee ka dhalatay dibad-baxa ay qabanqaabinayeen hoggaanka Xisbiga Wadani iyo diidmada xukuumadda, taas oo sababtay in xubno ka tirsan xisbiga xabsiga loo taxaabo isku dhacyo aan badnayna ay ka dhacaan meelaha qaar.
Xiisadaas oo Somaliland ka tagneed 48-saac ee u dambeeyay, ayaa waxaa maanta ku baxay waxgarad iyo siyaasiyiin, kuwaas oo kulamo xal raadin ah ka bilaabay magaalada Hargeysa.
Xubno uu horkacayey Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Somaliland ayaa maanta kulan la yeeshay Guddoomiyaha xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Cirro iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga, waxaana kulamada qeyb ka ahaa xubno kale oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee UCID, kuwaas oo kaalin ka qaadanaya dhex dhexaadinta laga dhex bilaabay Xisbiga Wadani iyo Xukuumadda Madaxweyne Muuse.
Xubnahaasi ka qeyb galay kulanka ayaa waxay si wadajir ah u cambaareeyeen xariga Xukuumadda Muuse Biixi ay kula kacday xubno ka tirsan xisbiga Waddani, taas oo khilaafka ka sii dartay, waxayna dhinacyadii maanta isku yimid si wadajir ah u sheegeen inay xukuumadu hayso wado qaldan.